Kuboshwe amaphoyisa angu-8 e-KZN ngawenkohlakalo | News24
Kuboshwe amaphoyisa angu-8 e-KZN ngawenkohlakalo
Durban – Amaphoyisa ayisishiyagalombili asebenzela eGolela Border Post, KwaZulu-Natal, aboshelwe amacala ahlobene nenkohlakalo, kusho izikhulu ngoLwesithathu.
Abasolwa, abaneminyaka ephakathi kuka-30 no-43 ubudala, baboshwe ngamanye amaphoyisa asebenza ophikweni lukazwelonke lweCounter Crime Intelligence Division kanye nabaseshi base-KZN.
Okhulumela amaphoyisa uBrigadier Jay Naicker uthe uphenyo lwezinyanga ezingu-8 luveze ukuthi amaphoyisa asolwa ngokufuna ukufumbathiswa ukuze adedele impahla nezimoto ukuba zeqe umngcele ziye eSwazini.
"Kuthe uma sekuqoqwe ubufakazi obanele, abaphenyi bathola izincwadi ezigunyaza ukuba babophe abasolwa.”
OLUNYE UDABA: Kuboshwe iphoyisa ngelenkohlakalo eKapa
UNaicker uthe ithimba libe selibabela kulo mngcele ngoLwesibili, kwaboshwa amaphoyisa amane esemsebenzini.
“Amanye amaphoyisa amabili aboshwe enkanjini kwathi amanye amabili aboshwa esoPhongolo.”
Lowo oyibamba likaKhomishana wamaPhoyisa esifundazweni, uMajor General Bheki Langa, ukwamukele ukuboshwa kwabasolwa.
UNgqongqoshe wezamaPhoyisa uFikile Mbalula naye ukwamukele ukuboshwa kwala maphoyisa wathi kuhambisana nesiphakamiso sakhe “sokukhuculula inkohlakalo embuthweni”.